ဗီဇာနံပါတ်ကဘာလဲ။ ဒီနေရာကိုဘယ်လိုရှာရမယ်ဆိုတာပြပေးပါမယ် ခရီးသွားသတင်း
အကယ်၍ သင်သည်နိုင်ငံတစ်ခုသို့သွားရန်စီစဉ်ထားပါကသင်လိုအပ်လိမ့်မည် ဗီဇာ။ ဤသည်ကိုမူရင်းနိုင်ငံရှိ၎င်း၏ကောင်စစ်ဝန်ရုံးသို့မဟုတ်သံရုံးမှတဆင့် ဦး တည်ရာနိုင်ငံမှကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ဖြစ်သည်။ အမျိုးမျိုးသောဗီဇာအမျိုးအစားများရှိပြီး၎င်းသည်သင်မည်မျှကြာကြာနေရန်၊ တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ဤဆောင်းပါး၌ရှင်းပြပါမည် ဘယ်မှာနှင့်ဘယ်လိုသင်ကတောင်းဆိုဖို့ရှိသည်သင်၏ဗီဇာနံပါတ်ကိုရှာရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီလိမ့်မည်။ အဲဒါကိုလက်လွတ်မထားပါနဲ့
1 ဗီဇာသို့မဟုတ်ဗီဇာ, ခရီးသွားလာရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်း
4 စပိန်နိုင်ငံသားတစ် ဦး အတွက်ဗီဇာလိုအပ်သောနိုင်ငံများမှာမည်သည်တို့နည်း။
ဗီဇာသည်စာရွက်စာတမ်းအားစစ်ဆေးပြီးတရားဝင်သည်ဟုသတ်မှတ်ရန်ညွှန်ပြသောအာဏာပိုင်များကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့်တွဲဖက်သည့်စာရွက်စာတမ်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံအတော်များများတွင်၎င်းဝတ်ဆင်ရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ ဥပမာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌၊ သင်ရက်အနည်းငယ်သာကုန်တော့မည်၊ သို့မဟုတ်ထိုတွင်နေထိုင်လိုပါက၎င်းကိုယူဆောင်သွားရမည်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လေဆိပ်မှသူတို့သည်သင့်ကိုမူလနေရာသို့ပြန်လာစေလိမ့်မည်။
တစ်ခုတည်းသောလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ် နေထိုင်ခွင့်သည်ရက်ပေါင်း ၉၀ ထက်မပိုစေရ (သုံးလ)။
နေ - သင်သည်ခရီးစဉ်တစ်ခုသို့မဟုတ်လေ့လာမှုများအတွက်လာပါကသင်တောင်းဆိုရန်ဖြစ်သည်။
နေထိုင်ရာ အကယ်၍ သင်သည်အလုပ်လုပ်ရန် (ကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်အလုပ်ခန့်ရန်) သို့မဟုတ်နေထိုင်ရန်နေခဲ့လျှင်။
သို့သော်သင်တိုင်းပြည်နှင့်သင်ခရီးသွားရသည့်အကြောင်းအရင်းပေါ် မူတည်၍ နောက်ထပ်အချို့ရှိပါသည်။
ပြည်တွင်း ၀ န်ထမ်းများ
သံတမန်များ၊ အရာရှိများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှဝန်ထမ်းများနှင့်နေတိုး
စပိန်နိုင်ငံသားတစ် ဦး အတွက်ဗီဇာလိုအပ်သောနိုင်ငံများမှာမည်သည်တို့နည်း။
အကယ်၍ သင်သည်စပိန်လူမျိုးဖြစ်ပြီး၎င်းသည်မည်သည့်နိုင်ငံသို့မဆိုအမေရိကန်သို့အပြင်သွားလျှင်၊ ဗီဇာလျှောက်ထားရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
ခရီးသွားဗီဇာသည် B2 ဟုလည်းလူသိများသည်။ သင်တိုင်းပြည်သို့သွားရန်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းဖြစ်သည်။ ဒါကမင်းကိုကူညီလိမ့်မယ် ခရီးသွားခြင်း၊ မိသားစုသို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းများသို့လည်ပတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆေးကုသမှုခံယူခြင်း; အဲဒီအစား၊ အဲဒါကိုအလုပ်လုပ်ဖို့သင်အသုံးမပြုနိုင်ဘူး။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှတွေ့ရှိပါကသူတို့သည်သင်၏ဗီဇာကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။
၎င်းသည်လူဝင်မှုမဟုတ်သောဗီဇာဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်နိယာမအားဖြင့်သင်သည်တိုင်းပြည်တွင်အမြဲတမ်းနေထိုင်ရန်အစီအစဉ်မရှိဟုဆိုလိုသည်။ အဆုံး၌သင်သည်သင်၏စိတ်ကိုပြောင်းလဲလျှင်, သင်သက်ဆိုင်ရာဗီဇာလျှောက်ထားရန်ရှိသည်.
တောင်းဆိုရန် သင့်အနေဖြင့်သင်၏မူလနေထိုင်ရာနိုင်ငံရှိသံရုံးသို့မဟုတ်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးကိုသွားရပါမည်။ သင်၏မျက်နှာနှင့်သင်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုကောင်းစွာပြသသည့်သင့်ကိုယ်သင်ဓာတ်ပုံရိုက်ပါ။ ခရက်ဒစ်ကဒ်ယူရန်လည်းမထိခိုက်ပါ။ အများအားဖြင့်သင်သည်အခကြေးငွေပေးရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ရှားပါးသော်လည်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုစီပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဤအရာကိုရှောင်ရှားရန်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးကိုအရင်ဆုံး၊ သငျသညျအသကျရှငျနှင့်အသက်ရှင်ရန်စီစဉ်ကြသည်မဟုတ် နှင့်ဒုတိယ, မင်းမှာအရင်းအမြစ်အလုံအလောက်ရှိတယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်သင်နေထိုင်ခွင့်ကဒ်ပြားကိုလျှောက်ထားပြီးဗီဇာတောင်းပါက၎င်းတို့အားသင့်အားပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းသင်သိထားသင့်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်အရာအားလုံးကိုလက်ဖြင့်သယ်ဆောင်ပြီးလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများမှန်ကန်ကြောင်းတွေ့ရှိပါက၎င်းသည်များသောအားဖြင့်ထက်မပိုပါ ငါးရက်ကြာ။ ၎င်းသည်သိပ်မများလှပါ၊ သင်၏ခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်ရန်၎င်းကိုသင်အသုံးချနိုင်သည်။
သင်၏ကဒ်ပြားကိုထုတ်ယူပြီးပါကဗီဇာနံပါတ်ကဘာလဲဆိုတာသင်စဉ်းစားမိလိမ့်မည် နံပါတ်များကြီးမား သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာတွေရှိတယ်၊ ဒါကိုငါတို့ဘယ်လိုလျင်မြန်စွာသိနိုင်မလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။
Visa နံပါတ်ကိုစာရွက်စာတမ်းတွင်တွေ့နိုင်ရန်အတွက်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏လက်၌ကိုင်ထားပြီးရှေ့မှောက်ကြည့်ရှုရန်သာလိုအပ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ျာဘက်အောက်ပိုင်း၌အနီရောင်ရှိသောသတင်းအချက်အလက်များကိုသာပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်သည်။ ၎င်းလက္ခဏာများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောဗီဇာနံပါတ်ဖြစ်သည်။
မင်းအဲဒီနေရာကိုရောက်ပြီလား အခုသင်ရုံရန်ရှိသည် ဗီဇာနံပါတ်ချပါ သို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုရှောင်ရှားဖို့ကအလွတ်ကျက်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီဇာနံပါတ်ကိုရှာတွေ့နိုင်သည့်ပြproblemနာမရှိစေရ။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကွဲပြားမှုမရှိပါ။
ဤဗီဇာနံပါတ်ကသင့်ကိုကူညီလိမ့်မည် အသစ်လုပ် မင်းနည်းနည်းကြာကြာနေချင်ရင်သင့်ဗီဇာ။ သင်၏ခရီးအတွက်အကြောင်းပြချက်ပြောင်းလဲသွားပါကသက်ဆိုင်ရာဗီဇာအတွက်သင်လျှောက်ထားရန်အရေးကြီးကြောင်းသတိရပါ။ ဒါကြောင့်သင်ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။
ဗီဇာကဘာလဲ၊ ဘာအတွက်လဲ၊ မင်းရဲ့နံပါတ်ကိုဘယ်လိုရှာရမယ်ဆိုတာမင်းတို့သိအောင်ကျွန်တော်တို့ကူညီပေးခဲ့တယ်။ ခရီးကောင်းကောင်း!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » အကြံပေးချက်များ » ဗီဇာနံပါတ်ကဘာလဲ။
ငါ၌ဘားကုဒ်ရှိသည့်အီးယူမှဗီဇာအမျိုးအစား (B1 / B2) ငါစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပြီးပြီ၊ ၎င်းသည်ဘားကုဒ်၏ညာဘက်အခြမ်း၊ ဗီဇာ၏အခြားဆုံးအဆုံးတွင်လည်းအတူတူပင်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်ယခုအချိန်တွင် ငါကငါ့ကိုတောင်းသောခရီးသွားပုံစံပေါ်တွင်ချရေးထား, ငါ့ကိုအသိအမှတ်မပြုပါဘူး။ ၎င်းသည်စာသည် ၇ လုံး (#s) သို့မဟုတ် ၈ ဂဏန်း (#s) နောက်လိုက်သောစာတစ်စောင်ဖြစ်ရမည်၊ ၎င်းသည်စာရွက်စာတမ်း၏ညာဘက်အောက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိပြီး၎င်းသည်ငါယခင်ကဖော်ပြခဲ့သောနံပါတ်နှင့်ငါလုပ်ခဲ့သည့်နေရာဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဗီဇာနံပါတ်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည်။